भारत अमेरिकातिर ढल्कियो, अब नेपालले के गर्छ ?
Homeराष्ट्रिय खबरभारत अमेरिकातिर ढल्कियो, अब नेपालले के गर्छ ?
काठमाडौं । यो साता दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियामा विकसित घटनाक्रमले क्षेत्रीय राजनीतिमा असन्तुलनका संकेतहरु देखिएका छन् । यो असन्तुलनको बाछिटा काठमाडौंसम्म आउने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।
कामना गरौं- विश्व समुदायमा नेपालको छवि कमजोर नबनोस् । र, दक्षिण एशियाको एउटा सार्वभौम देश विदेशी शक्तिहरुको खेलमैदान नबनोस् ।-अरुण बराल/Onlinekhabar.com